ရွှေဟင်္သာသတင်းဌာန - ပြည်သူ့သတင်းဌာန မွန်အမျိုးသား သတင်းဌာန - မူလစာမျက်နှာ
Menu	မူလစာမျက်နှာသတင်း— သတင်းတိုကဏ္ဍ— ပြည်တွင်းသတင်းကဏ္ဍ— နိုင်ငံတကာသတင်းကဏ္ဍအယ်ဒီတာ့အာဘော်ဆောင်းပါးတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းဟစ်တိုင်— ကောက်နှုတ် ဖော်ပြချက်များ— ပေးစာကဏ္ဍရွှေဟင်္သာ သတင်းဌာန အကြောင်းဆက်သွယ်ရန်	Login
ရွှေဟင်္သာ သတင်းဌာန အကြောင်းဆက်သွယ်ရန်
Deprecated: Non-static method NSP_GK4_Utils::cutText() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/phophtaw/public_html/burmese/modules/mod_news_pro_gk4/tmpl/layout.parts.php on line 200
Deprecated: Non-static method NSP_GK4_Thumbs::createThumbnail() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/phophtaw/public_html/burmese/modules/mod_news_pro_gk4/tmpl/layout.parts.php on line 304
Deprecated: Non-static method NSP_GK4_Thumbs::checkSpecialImages() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/phophtaw/public_html/burmese/modules/mod_news_pro_gk4/gk_classes/gk.thumbs.php on line 127
Deprecated: Non-static method NSP_GK4_Thumbs::translateName() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/phophtaw/public_html/burmese/modules/mod_news_pro_gk4/gk_classes/gk.thumbs.php on line 127
Deprecated: Non-static method NSP_GK4_Thumbs::getRealPath() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/phophtaw/public_html/burmese/modules/mod_news_pro_gk4/gk_classes/gk.thumbs.php on line 32
Deprecated: Non-static method NSP_GK4_Thumbs::checkCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/phophtaw/public_html/burmese/modules/mod_news_pro_gk4/gk_classes/gk.thumbs.php on line 206
Deprecated: Non-static method NSP_GK4_Thumbs::translateName() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/phophtaw/public_html/burmese/modules/mod_news_pro_gk4/gk_classes/gk.thumbs.php on line 207
Deprecated: Non-static method NSP_GK4_Thumbs::translateName() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/phophtaw/public_html/burmese/modules/mod_news_pro_gk4/gk_classes/gk.thumbs.php on line 222
Deprecated: Non-static method NSP_GK4_Thumbs::translateNameOutput() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/phophtaw/public_html/burmese/modules/mod_news_pro_gk4/tmpl/layout.parts.php on line 306
Deprecated: Non-static method NSP_GK4_Thumbs::getRealPath() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/phophtaw/public_html/burmese/modules/mod_news_pro_gk4/gk_classes/gk.thumbs.php on line 43
Deprecated: Non-static method NSP_GK4_Thumbs::checkSpecialImages() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/phophtaw/public_html/burmese/modules/mod_news_pro_gk4/gk_classes/gk.thumbs.php on line 51
Deprecated: Non-static method NSP_GK4_Utils::cutText() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/phophtaw/public_html/burmese/modules/mod_news_pro_gk4/tmpl/layout.parts.php on line 218
အသိပေးခြင်းယခင် နိုင်ငံတကာ အလှူငွေဖြင့် ရပ်တည် လည်ပတ် ခဲ့သော ကျနော်တို့၏ ရွှေဟင်္သာ သတင်း ဌာနအား “ဟင်္သာမီဒီယာ ကော်ပိုရေးရှင်း” ဟု အမည် ပြောင်းကာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဖြင့် ရပ်တည်သည့် ပုံစံဖြင့် ဆက်လက် တည်ရှိ သွားမည် ဖြစ်သည်။
လေ့ကျင့်ရေး တပ်က ပိုက်ဆံယူ၍ နားလည်မှုဖြင့် ဖွင့်ထား…မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင် တက္ကသိုလ် အရှေ့ရှိ အမှတ် (၃) တက္ကသိုလ် လေ့ကျင်းရေး (UTC) …	မွန်ပြည်နယ် မုဒုံ မြို့နယ်၌ ကြိုတင်မဲလက်မှတ် များက…မွန်ပြည်နယ်၊ မုဒုံမြို့နယ် မြို့မ(၁) ရပ်ကွက်တွင် နိုဝင်ဘာ (၈) ရက် အထွေထွေ ရွေးကေ…	နောက်ဆုံး ထုတ်ပြန် ထားသည့် မဲစာရင်း၌ နာမည်မပါလျှင်…နိုဝင်ဘာ (၈) ရက်နေ့ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင် နောက်ဆုံး ထုတ်ပြန်သော မဲစာရင်း၌ နာမ…	ရွေးကောက်ပွဲ လုံခြုံရေး အတွက် အထူးရဲ ၁၀၀ ဦးကျော် …မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့ နယ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ လုံခြုံရေး အတွက် အရပ်သား များ…	ဒေသခံတွေ တိုင်ကြားမှုကြောင့် ပေါင်မြို့နယ်ရှိ ကျောက…မွန်ပြည်နယ်၊ ပေါင်မြို့နယ်၊ ကုလားမတောင် သစ်တော ကြိုးဝိုင်းအတွင်း ကျောက်မိုင်း လု…	ကျိုက်မရောတွင် မဲရုံလုံခြုံရေးအတွက် ခရီးထွက်မည့် တ…မွန်ပြည်နယ်၊ ကျိုက်မရောမြို့နယ် တွင်းရှိ နယ်မြေခံ ခမရ (၂၀၈) ခြေမြန် တပ်ရင်းမှ တပ…	သံလွင် တံတား (ချောင်းဆုံ) စီမံကိန်း အတွက် ရရှိထားေ…မော်လမြိုင်နှင့် ဘီလူးကျွှန်းအား ဆက်သွယ်မည့် သံလွင်တံတား (ချောင်းဆုံ) တည်ဆောက်ရေး…	မွန်ပြည်နယ်တွင် မသန်စွမ်း မဲဆန္ဒရှင်ဦးရေ (၂၂၀၀) ကေ…မွန်ပြည်နယ် တွင်း၌ ၂၀၁၅ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲအား မဲပေးနိုင်သည့် မသန်စွမ်း မဲဆန္ဒရှ…	မွန်၊ ကရင်၊ ကယားနှင့် တနင်္သာရီ တို့က “မဲ” အခြေအနေကိ…လာမည့် နိုဝင်ဘာလ (၈) ရက်နေ့၌ မြန်မာ နိုင်ငံတွင် ကျင်းပမည့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေေ…	ထိပ်သီး ညှိနှိုင်းချိန်တွင်း နှုတ်မိန့်ဖြင့် တိုက်ပွ…တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ (၅) ဖွဲ့တို့မှ ထိပ်သီး ခေါင်းဆောင်များ နေပြည်တော…	ရှမ်းပြည်နယ် အထူးပြု (၄) နှစ်ကြာ ငြိမ်းချမ်းရေး လု…ဥရောပ သမဂ္ဂ (EU) ၏ ငွေကြေး အကူအညီဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ် အထူးပြု ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်း…	KNPP ၏ နယ်လှည့် စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ်ကို သမ္မတနှင့် က…စစ်သည် အင်အား လက်နက်ကိုင် တပ်များ ပါဝင်၍ ကယား ပြည်နယ် အတွင်းရှိ ဒေသခံ ပြည်သူများ…	KNPP ၏ စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ် သွားရောက်ရေး တင်ပြ ချက်…ကယားပြည်နယ် ရှားတော မြို့နယ် အတွင်း၌ ကရင်နီ အမျိုးသား တိုးတက်ရေး ပါတီ KNPP မှ နယ…	ရှမ်းပြည်နယ် တွင်းရှိ စစ်ပြေး ဒုက္ခသည် များအတွက် ကျ…ရှမ်းပြည်နယ် အတွင်းရှိ စစ်မက် ဖြစ်ပွားရာ ဒေသမှ ဒုက္ခသည် များအတွက် ဂျပန်နိုင်ငံ န…	ပြည်ထောင်စုမှ ခွဲထွက်မည် မဟုတ်ဟု ပန်ခမ်း (ပန်ဆန်း)…အနာဂါတ်၌ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက် နိုင်ပါက တိုင်းရင်းသားများ လက်နက်ကိုင် အဖွ…	ပိုင်နက် ကျုးလွန် မှုဖြင့် တရားစွဲ ထောင်ချ ခံထားရသည…ကယားပြည်နယ်၌ မြန်မာ့ တပ်မတော် ခမရ (၅၃၁) နှင့် အမြောက်တပ် (၃၆၀) မှ သိမ်းဆည်း ထားသ…	1
သတင်း	အယ်ဒီတာ့အာဘော်	ဆောင်းပါး	မေးမြန်းခန်း	ဟစ်တိုင်	မာတီမီဒီယာ	Deprecated: Non-static method NSP_GK4_Utils::cutText() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/phophtaw/public_html/burmese/modules/mod_news_pro_gk4/tmpl/layout.parts.php on line 200
အသိပေးခြင်းယခင် နိုင်ငံတကာ အလှူငွေဖြင့် ရပ်တည် လည်ပတ် ခဲ့သော က...	လေ့ကျင့်ရေး တပ်က ပို…မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင် တက္ကသိုလ် အရှေ့ရှိ အမှတ် (...	မွန်ပြည်နယ် မုဒုံ မြ…မွန်ပြည်နယ်၊ မုဒုံမြို့နယ် မြို့မ(၁) ရပ်ကွက်တွင် န...	နောက်ဆုံး ထုတ်ပြန် ထ…နိုဝင်ဘာ (၈) ရက်နေ့ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင် နောက်...	Deprecated: Non-static method NSP_GK4_Utils::cutText() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/phophtaw/public_html/burmese/modules/mod_news_pro_gk4/tmpl/layout.parts.php on line 200
အသိပေးခြင်းယခင် နိုင်ငံတကာ အလှူငွေဖြင့် ရပ်တည် လည်ပတ် ခဲ့သော က...	လေ့ကျင့်ရေး တပ်က ပို…မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင် တက္ကသိုလ် အရှေ့ရှိ အမှတ် (...	မွန်ပြည်နယ် မုဒုံ မြ…မွန်ပြည်နယ်၊ မုဒုံမြို့နယ် မြို့မ(၁) ရပ်ကွက်တွင် န...	နောက်ဆုံး ထုတ်ပြန် ထ…နိုဝင်ဘာ (၈) ရက်နေ့ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင် နောက်...	Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/phophtaw/public_html/burmese/templates/gk_news/lib/framework/helper.layout.php on line 177
Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/phophtaw/public_html/burmese/includes/application.php on line 539
Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/phophtaw/public_html/burmese/templates/gk_news/lib/framework/helper.layout.php on line 177
07 November, 2015အသိပေးခြင်းယခင် နိုင်ငံတကာ အလှူငွေဖြင့် ရပ်တည် လည်ပတ် ခဲ့သော ကျနော်တို့၏ ရွှေဟင်္သာ သတင်း ဌာနအာ...	07 November, 2015လေ့ကျင့်ရေး တပ်က ပိုက်ဆံယူ၍ နားလည်မ…မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင် တက္ကသိုလ် အရှေ့ရှိ အမှတ် (၃) တက္ကသိုလ် လေ့ကျင်းရေး (UTC) ...	07 November, 2015မွန်ပြည်နယ် မုဒုံ မြို့နယ်၌ ကြိုတင်…မွန်ပြည်နယ်၊ မုဒုံမြို့နယ် မြို့မ(၁) ရပ်ကွက်တွင် နိုဝင်ဘာ (၈) ရက် အထွေထွေ ရွေးကေ...	07 November, 2015နောက်ဆုံး ထုတ်ပြန် ထားသည့် မဲစာရင်း…နိုဝင်ဘာ (၈) ရက်နေ့ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင် နောက်ဆုံး ထုတ်ပြန်သော မဲစာရင်း၌ နာမ...	05 November, 2015ရွေးကောက်ပွဲ လုံခြုံရေး အတွက် အထူးရ…မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့ နယ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ လုံခြုံရေး အတွက် အရပ်သား များ...	ဆောင်းပါးကဏ္ဍ
Deprecated: Non-static method NSP_GK4_Utils::cutText() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/phophtaw/public_html/burmese/modules/mod_news_pro_gk4/tmpl/layout.parts.php on line 439
ကော်သူးလေ တပ်မတော် KAF အဖြစ် ပေါင်းစည်းမှု…	စာတစ်ရွက်နှင့် အပြည့် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက် ခဲ့စဉ်	မောင် ----- ကျမ သွားနှင့် ပြီနော်	အကန့် အသတ် အခက်အခဲ များနှင့် အိုဘယ့်…	အတည် ဖြစ်ဖို့ များနေတဲ့ ဒုဝန်ကြီး များအား…	ငြိမ်းချမ်းရေး စစ်တမ်း (၆)	ငြိမ်းချမ်းရေး စစ်တမ်း (၃)။	“ကျနော် အမေ့အတွက် ရှင်ပြုရဦးမယ်၊ ကျနော် သေလို့…	အမှောင်ခေတ်သို့ သမင်လည်ပြန် ခရီးသွားခြင်း	နားလည် စေချင်သော တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေး မည်သည့်…	အသံတိတ် လူသတ်သမား (သို့) လိုင်စင်ရ လူသတ်သမား	ထိုင်းနေ မွန်လူမျိုးများ၏ ကလေးများ အနာဂါတ်၌ မွန်စာ…	မွန်တို့၏ သမိုင်းမှတ်တိုင် “သုဝဏ္ဏဘူမိ” အား ခြေရာ…	မွန်တို့၏ သမိုင်းမှတ်တိုင် “သုဝဏ္ဏဘူမိ” အား ခြေရာကောက်ခြင်း…	မွန်စာပေ သင်ကြားရေးကို ဖွံ့ဖြိုးရေး အချိန် ဖြင့်သာ…	ဦးဝင်းတင်အား ဂုဏ်ပြု တမ်းချင်း	တပ်မတော် ဖြိုခွဲသူ ဒို့ရန်သူ လို့ ကြွေးကြော်…	၀ါသနာထက် ရည်မှန်းချက်သာ ဦးစားပေး ရသော KIA…	ကာချုပ်၏ UWSA နှင့် အလွတ်သဘာ တွေ့ဆုံမှုများ…	ကမ္ဘာ့ အရှည်ဆုံး လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခ တစ်ခု…	၀ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း အကြောင်း သုံးသပ်ချက်…	၀ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်း အကြောင်း	ရာမည တိုင်းထဲမှ ပါဒ နိင်ငံအတွင်း ရှိ…	စစ်အစိုးရ ၏ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ…	တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ ၏…	တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ ၏…	တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ ၏…	ကရင် လူမျိုးများ အားလုံး သိထားသင့်တဲ့ KNU…	1
ရွှေဟင်္သာ သတင်းဌာနသည် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အခြေစိုက်သည့် Burma News International (BNI) ၏ အဖွဲ့ဝင် သတင်းဌာန ဖြစ်သည်။
အခြား Burma News International (BNI) ၏ အဖွဲ့ဝင် သတင်းဌာန အဖွဲ့အစည်း များမှာ -
လွတ်လပ်သော မွန်သတင်း အေဂျင်စီ ၊ ကချင် သတင်းဌာန ၊ ကုလားတန် သတင်းဌာန ၊ ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်) ၊ ကေအိုင်စီ ၊ ခိုနူမ်းထုန် သတင်းဌာန ၊ မဇ္ဈိမ သတင်းဌာန ၊ နိရဉ္စရာ သတင်းဌာန ၊ သတင်းနှင့် မီဒီယာကွန်ယက် ၊ သျှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်းဌာန	အယ်ဒီတာ့အာဘော်
Deprecated: Non-static method NSP_GK4_Utils::cutText() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/phophtaw/public_html/burmese/modules/mod_news_pro_gk4/tmpl/layout.parts.php on line 18
Deprecated: Non-static method NSP_GK4_Thumbs::createThumbnail() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/phophtaw/public_html/burmese/modules/mod_news_pro_gk4/tmpl/layout.parts.php on line 80
Deprecated: Non-static method NSP_GK4_Thumbs::translateNameOutput() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/phophtaw/public_html/burmese/modules/mod_news_pro_gk4/tmpl/layout.parts.php on line 82
Deprecated: Non-static method NSP_GK4_Utils::avatarURL() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/phophtaw/public_html/burmese/modules/mod_news_pro_gk4/tmpl/layout.parts.php on line 157
ပြန်လည် နိုးထ လာသော ရွှေဟင်္သာ သတင်းဌာနAugust 28, 2013	ရွှေဟင်္သာသတင်းဌာန၏ အခြေခံ အကြောင်းတရားများAugust 22, 2013	ရွှေဟင်္သာ သတင်း ဌာန၏ ရှင်းတမ်းMarch 20, 2013	တိုင်းရင်းသား၊ ဒီမိုကရေစီ အခြေခံ ပြည်သူလ…March 20, 2013	အမြင်ဖလှယ်ခြင်း
တပ်မတော် ဖြိုခွဲသူ ဒို့ရန်သူ လို့ ကြွေးေ…	၀ါသနာထက် ရည်မှန်းချက်သာ ဦးစားပေး ရသော KIA တပ်မဟာ(၃)မှူး ဗို…	ကာချုပ်၏ UWSA နှင့် အလွတ်သဘာ တွေ့ဆုံမှုများ နောက်ဝယ် ၄င်းတို…	၀ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်း အကြောင်း	စစ်အစိုးရ ၏ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ အပေါ် နိုင်ကွ…	ပြက္ခဒိန်
ဓမ္မစေတီမင်း၏ ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်း ၁၉၁၉
ဝင်နဲာ	“ဂျပန် ရေတွင်း ကျေးရွာမှာ လုပ်မယ် ဆိုရင် သွားရ လာရတာ အဆင် ပိုပြေ တယ်လေ၊ ပုရိသတ် အင်အား ပိုများများ ရမှာပေါ့၊ ဒါပေမယ့်လို့ ဗဟိုက ခွင့်ပြုချက် မပေး ခဲ့ဘူး၊ " အဲမှာ လုပ်ရင် ဗမာ စစ်တပ်က ရန်ရှာမှာကို…
(၆၇) ကြိမ်မြောက် မွန်တော်လှန်ရေးနေ့ အခမ်းအနား နေရာ (၅) ခု၌ မွန်ပြည်သစ် ကျင်းပမည်
ဇော်ဇော်	အင်း အဲဒီလိုဘဲ ပြောလို့ ပီးဘူး။ သူတို့ နောက်မှာ သူတို့ထက် ကြီးတဲ့ သူတွေကို ကိုင်ထားတဲ့ ခရိုနီ တွေကို ရှင်းရမှာ။ သူတို့က ပိုပြီး အပြောင်း အလဲ မလုပ်ချင် ဘူးလို့ ထင်တယ်။
အရပ်ဖက် လူမှုအဖွဲ့များ အပေါ် မြို့နယ်နှင့် ရပ်ကျေး အဆင့် အောက်ခြေ အာဏာပိုင်များ ကန့်သတ်မှု ရှိနေ
Htuemyat	ကျေးဇူး ပြုရ်ျ တည်နေရာ ပြောပေး နိုင်မလား
နေရာသစ်၌ မယ်တော်ဆေးခန်း စတင် အခြေချ
မောင်လော..သုံးဆူ	ဘုရားသုံးဆူ မြို့တွင် ဒုစရိုက် နယ်မြေ တစ်ခု ရှိပါသည်။ ၄င်းမှာ အာဏာပိုင် များ၏ အမိန့်ရ သူတောင်းစားများ မှီခိုရာ(မထသ) အဝေပြေး မော်တော်ယဉ် ထိမ်းသိမ်းရေး စခန်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
အကောက် ဂိတ်များ ကို လျှော့ ချပေးရန် နှင့် ဂိတ်မှူးကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ခွင့် ပေးရန် တောင်းဆို
နိုင်ဘန်း	ကောင်းမွန်သည့် ဆောင်းပါး တပုဒ် ဖြစ်ပါသည်။ စားရေးသူ ဦးအောင်ထူအား ဤကဲ့သို့သော ဆောင်းပါး များများ ရေးစေချင် ပါသည်။
Phophtaw News Association received sub-grand from Strengthening Ethnic Voices in Myanmar, which is funded by the European Union.
Other Languages (အခြား ဘာသာ စာမျက်နှာ များသို့)
Deprecated: Non-static method NSP_GK4_Utils::cutText() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/phophtaw/public_html/burmese/modules/mod_news_pro_gk4/tmpl/layout.parts.php on line 434
အချိုးကျ ကိုယ်စားပြု စနစ် (PR) အား ကန့်ကွက် ခဲ့သည်…“PR စနစ် ဆိုရင် အသစ် ပြန်ရှင်းပြ ပေ…	မွန်ပြည်နယ် တွင်းက မူးယစ် ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်မှု အပေါ် …
“ရှောင်လေ ဝေးဝေး မူးယစ်ဆေး” ဆို…	အမေရိကန် ရောက် KIA ဒုတိယ ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ဂွ…
၀ါရှင်တန်ဒီစီ ကို ကိုရောက် နေတဲ့ …	Font Suggestion
Phophtaw News Association web page is using Mon and Zawgyi fonts. So, if you can't read well please download Mon and Zawgyi fonts at the Download link.
Mon font download here.
Zawgyi font Download here.	ဟစ်တိုင်ကဏ္ဍ
စစ်မက်ဒေသ လိင်အကြမ်း ဖက်မှု ရပ်တန်းက ရပ်သင့်June 14, 2014	နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ မေလ တစ်ရက်နေ့တ…May 01, 2014	အမေရိကန် အရာရှိကြီးများ ဗိုလ်ချုပ်ဂွန်မော်နဲ့…April 22, 2014	တပ်မတော် အရာရှိ ဟောင်း တဦး ၄င်း၏ မှားယွင်းမှ…April 18, 2014	အကြောက်တရား နဲ့ ချောက်ချားစရာ မလိုတဲ့ ဝေါဟာရ …April 10, 2014	မြန်မာနိုင်ငံ မိုးလေဝသ အခြေအနေ
Myanmar	Partly Cloudy
Humidity: 36%	Wind: 3.22 km/h	13 Feb 2016
November 2015 (10) September 2015 (1) May 2015 (10) March 2015 (2) February 2015 (3) January 2015 (5) December 2014 (18) November 2014 (26) October 2014 (17) September 2014 (8) August 2014 (6) July 2014 (4) အဖတ်အများဆုံး
ဓမ္မစေတီမင်း၏ ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်း ၁၉၁၉	မြန်မာ အမျိုးသမီး တစ်ဦးအား မလေး နိုင်ငံသား (၃) ဦးမှ ဓါးထော…	အမိမြေ အခြေချရေး ရက္ခိုင့် တပ်မတော် အသင့်ဖြစ်နေ	ရခိုင် တပ်မတော် စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ် ထွန်းမြတ်နိုင်…	ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွှတ်တော်ကို စွန့် ခွာသင့်ပြီ အပိုင်း (၁)	News Gallery
ဒီဇိုင်းအပြင်အဆင်နှင့် မူပိုင်ခွင့် © ရွှေဟင်္သာသတင်းဌာန